Wasiirka Arrimaha dibadda Maamulka Somaliland : Waa dhab Imaaraadka ma Aqoonsana Somaliland | SAHAN ONLINE
Wasiirka Arrimaha dibadda Maamulka Somaliland : Waa dhab Imaaraadka ma Aqoonsana Somaliland
HARGEYSA – Wasiirka Arrimaha dibadda ee maamulka Somaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa ka hadlay eedeyntii kasoo yeertay Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka Waddani iyo hadalkii Wasiir dowlaha Imaaraadka carabta ee ahaa in aanay aqoonsanayn Somaliland.
Dr Sacad Cali Shire ayaa ka jawaabay eedeynta,wuxuuna ku adkeystay in heshiiskii ay la galeen Imaaraadka uu ajaa mid sax ah isla markaana ahaa heshiis daneed iyo mid saaxiibtinimo.
….”Heshiiska anaga iyo Imaaraadka Carabta waa mid daneed iyo saaxibtinimo aan wada galnay, Soomaaliya waxay la leeyihiin waa mid iyaga u gaar ah oo aan anaga na quseyn”ayuu ku sheegay Waraysi uu siiyay yiri laanta afka Soomaaliga ee BBC-da.
Wasiirka ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay eedeynta loo soo jeediyay ee ahaa inay khiyaano qaran galeen iyo in bulshada laga qariyay heshiiska.
….”Khiyaamo qaran oo la galay ma jirtp, iyo wax dad laga qariyay, heshiiskaas markii aanu galeynay Soomaaliya qeyb kama aheyn”… ayuu yiri Sacad Cali Shire.
Wuxuu sheegay in heshiiska dekadda Berbera uu horey Baarlamaanka Somaliland ,isagoo tifaftiran la geeyay,lagana akhriyay,lana ansixiyay,wixii intaas ka dambeeyana loo raacayo sharciga.
Dr. Sacad Cali Shire ayaa sheegay in ay sax tahay in Imaaraadka aanay aqoonsanayn Somalila isla markaana aanay Safaarad iyo qunsuliyad ku lahayn sidoo kalena heshiiska Berbera ay la galeen dowladii hore ee Soomaaliya.
Wasiir dowlaha Arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta Anwar Mohamed Gargash oo maalmo ka hor waraysi siiyay BBC Laanteeda Af Carabiga ayaa sheegay iney aqoonsan yihiin midnimada Soomaaliya balse aysan aqoonsanayn Somaliland taasoo xiisada weyn ku abuurtay Somaliland.